"အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers (ပြင်ဆင်ရန်)
၀၈:၃၂၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက်နေ့က မူ
၁၈၆၈ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၂ လ
→‎Strange 'C' title in its category: အပိုင်းသစ်
၂၂:၅၂၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
Vermont (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
၀၈:၃၂၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(→‎Strange 'C' title in its category: အပိုင်းသစ်)
Hello Ninjastrikers! I apologize for my writing in English, but it is the only language we have in common. I was recently sentalink to the above-linked article, withaspecific note about [[ရိုဟင်ဂျာ#အစ္စလာမ်_ဝါဒပြန့်ပွားရေး_ပြဿနာ|this paragraph]]. I am not certain about the accuracy of Google Translate or Yandex Translate (I used both), but it seems that the article does havealot of neutrality issues. I understand that articles about ethnic subjects where conflict exists are very unlikely to be completely neutral on the projects in the languages relevant to the ethnic conflict, but at the very least some degree of neutrality and encyclopedic tone should be present. The paragraph I linked, if the machine translations are even remotely correct, is unsourced opinion and incredibly inappropriate for an encyclopedia. A significant portion of the rest of the article has similar issues with neutrality and sourcing. I would very much value your thoughts on whether this article can be edited more neutrally. Best regards, and thank you for your time, [[အသုံးပြုသူ:Vermont|Vermont]] ([[အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Vermont|ဆွေးနွေး]]) ၂၂:၅၂၊ ၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
== Strange 'C' title in its category ==
[[မြင့်ကြွယ်၊ မြို့မ|မြို့မ-မြင့်ကြွယ်]] page name က သက်ဆိုင်တဲ့ category (ဥပမာ- '၂၀၂၁ ကွယ်လွန်သူများ') ကို ဝင်ကြည့်ရင် 'C' ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ သီးသန့်ပေါ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ နာမည်က 'မ' နဲ့ စတာဖြစ်တဲ့အတွက် 'မ' ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ပေါ်သင့်တာပါ။
မြင့်ကြွယ် (မြို့မ) လို့ ရွေ့လိုက်လည်း ဘာမမထူးပဲ 'C' ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ပေါ်နေပါသေးတယ်။ (မြသွဲ့သွဲ့ခိုင် တောင် 'မ' ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ပေါ်နေတာကို သတိထားမိပါတယ်။ သူများတွေလို category title အမှန်နဲ့ပဲ နာမည်ပေါ်စေလိုပါတယ်။)
category ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး page name အား လိုအပ်သလို fix လုပ်ပေးပါရန် အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။
--[[User:Ladybesttruthful|<span style="background-color:AliceBlue; color:blue; padding:2px 3px 1px 3px;">✼𝓛𝓪𝓭𝔂𝓫𝓮𝓼𝓽𝓽𝓻𝓾𝓽𝓱𝓯𝓾𝓵✼</span>]] ([[User talk:Ladybesttruthful|<span style="color: blue; font-size: 20px;">✍✉</span>]]) ၀၈:၃၂၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/668913" မှ ရယူရန်